6ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကို Motion ပြိုင်ပွဲ Simulator အကြွေစေ့သုံးဖန်သားပြင်ကား operated - Kydavr-တိုက်ရိုက် VR AR ထုတ်လုပ်ခြင်း,9: D VR,AR Interactive မှ Projection,5D7D ရုပ်ရှင်,အခမဲ့အပန်းဖြေပန်းခြံဒီဇိုင်း.
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » 6ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကို Motion ပြိုင်ပွဲ Simulator အကြွေစေ့သုံးဖန်သားပြင်ကား operated
6ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကို Motion ပြိုင်ပွဲ Simulator အကြွေစေ့သုံးဖန်သားပြင်ကား operated
1. ရှင်းပါတယ်3screen displayed;
2. Simulate the steering wheel;
3. Simulate the accelerator pedal;
5. 6ပြောင်းလဲနေသောလျှပ်စစ်ဆလင်ဒါ dof;
7. Logitech စတီယာရင်.
ထုတ်ကုန်အမည် 6Dof Motion racing simulator Main Material သံမဏိ
အရွယ် 2.3*2.6*2 မီတာ အဓိကအရောင် အနီ / အနက်ရောင်
ဗို့အား 220 V ကို ပါဝါ 2.5KW
အလေးချိန် 500 ကီလိုဂရမ် သိမ်းပိုက်ထားသောနေရာ6m2
The Dynamic Racing Simulator is extremely fun, innovative, stimulating, shocking, entertaining, and popular. It can capture the eye of the customer and the super-advanced entertainment experience inalarge amount and quickly.
The new driving experience of the 6-DOF core motion system createsanew driving experience centered on the 6-DOF motion system. Professional drivers participate in tuning to create realistic and precise simulation results.
1.တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်, အာမခံချက် 12 လများ.
2. နောက်ဆုံးပေါ်လည်ပတ်ရေးစနစ်, operating interface ကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်.
3. ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအဖွဲ့သည်သင်၏အထောက်အပံ့ဖြစ်သည်.
4. ရောင်းချပြီးနောက်အကောင်းဆုံး, မင်းကိုဝတ်ပြုမယ် 24 နာရီ.
1.မည်သည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတည်နေရာ VR အတွေ့အကြုံကိုသရုပ်ပြဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, ပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို, သို့မဟုတ်သင်တိုကိုအခြား VR အကြောင်းအရာ.
ဒါဟာရင်ပြင်မှာထားရှိနိုင်ပါသည်, ပန်းခြံများ, အပန်းဖြေခန်းမ, လေဆိပ်, ကလပ်, ဒါကြောင့်အပေါ်ပြတိုက်နှင့်.
2.သိပ္ပံ, ပညာရေး, ပြပွဲ, ဝိုင်း, စတိုးဆိုင်ဖွင့်နှင့်အခြားအခါသမယ.
3.သငျသညျလျင်မြန်စွာလူ့အသွားအလာကိုဆွဲဆောင်ဖို့လိုအပ်အရာအားလုံးအတှကျအသုံးပွု, အာရုံစူးစိုက်မှု, စိုးရိမ်ပူပန်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခါသမယ, ကဲ့သို့: ဂိမ်းစင်တာ, ပန်းခြံ, shopping mall etc.
အဆိုပါur S ကervice:
4.အကောင်းဆုံးပြီးနောက်-ရောင်းအား services.There On-site ကိုတပ်ဆင်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာများဖြစ်ကြသည်, 1 တစ်နှစ်အခမဲ့အာမခံနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်
(1)မေး: 6Dof Motion ပြိုင်ကား Simulator တွင်မည်မျှဂိမ်းများရှိသည် ?
တစ်ဦးက:3ဂိမ်းများ.
(2) မေး: ပြိုင်ကားကား Simulator ၏ဂိမ်း၏အဘယျသို့သော?
တစ်ဦးက: ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များကားများ, ရွေးချယ်မှုအတွက်လမ်းကြောင်း.
(3) မေး: Are you direct factory?
တစ်ဦးက: ဟုတ်တယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံကွမ်ကျိုး၌တည်ရှိ၏.
() မေး: MOQ ဆိုတာဘာလဲ?
(5) မေး: အကယ်၍ သင်၏ထုတ်ကုန်များ၏ voltage နှင့် plug သည်ကျွန်ုပ်တို့စံနှင့်ကိုက်ညီပါက?
တစ်ဦးက: ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဗို့အားကိုအတည်ပြုပြီးဖောက်သည်များနှင့် ဆက်သွယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းအားသင်၏တောင်းဆိုမှုအဖြစ်အတည်ပြုပါလိမ့်မည်.
(6) မေး: ထုတ်ကုန်ကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်သလိုစိတ်ကြိုက် ပြုလုပ်၍ ကျွန်ုပ်၏အမှတ်အသားကိုတင်နိုင်ပါသလား?
တစ်ဦးက: ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုအရောင်အပါအ ၀ င်လိုအပ်သလိုဒီဇိုင်း ပြုလုပ်၍ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်, ပုံစံနှင့်လိုဂို.
တစ်ဦးက: ကွဲပြားခြားနားသော port ကိုကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်. ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရမယ်, အကြောင်းပါ 1 ပင်လယ်ရေကြောင်းအားဖြင့်တစ်လနှင့် 3-7 လေကြောင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ရက်.
5 - 10 ရက်ပေါင်း.
VR ပြိုင်ပွဲ, 9: D VR
all-ဝင်ရိုးလှည့် 1080 သံ Warrior VR စက် Virtual Reality Charm စက်
1080 VR ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် XYZ VR ကြိတ်စက် Coaster Amazing အားကစားပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံ
VR အားကစားပြိုင်ပွဲ Simulator ကိုနှစ်ချက်ကစားသမားမဟာ VR စီးပွားရေး
VR ကလေးတွေကဒိုင်နိုဆောအထူးကလေးသူငယ် VR အားကစားပြိုင်ပွဲ
ကလေးများ VR အားကစားပြိုင်ပွဲနေချင်စဖွယ်ဒိုင်နိုဆော VR မော်ဒယ်
VR ခုန်ပြီးတော့ VR ထိတ်လန့ဂိမ်းဗီဒီယို Displayer